कोरोना भाइरस लागेर निको भएका बिरामीमा फेरि संक्रमण भएपछि देशभर हंगामा, काे हुन उनी ? — Imandarmedia.com
कोरोना भाइरस लागेर निको भएका बिरामीमा फेरि संक्रमण भएपछि देशभर हंगामा, काे हुन उनी ?
एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको भएकामा फेरि संक्रमण देखिएको छ । निको भएका संक्रमित ५१ जनामा फेरि उक्त भाइरसको संक्रमण भेटिएको र यसले भाइरसविरुद्धको लडाईमा अझ चुनौति थपिएको डेली मेलले जनाएको छ ।
संक्रमित सबैलाई दाइगुस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएको दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् । दाइगु भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित दक्षिण कोरियाली शहर हो ।
भाइरसको संक्रमणबाट निको भएको भनिएको केही दिनमा परीक्षण गर्दा उनीहरुमा संक्रमण भेटिएको हो । ती बिरामीमा नयाँ भाइरसको संक्रमणभन्दा पनि शरीरमा पहिला नै रहेका भाइरस पुनर्जाग्रित भएको दक्षिण कोरियाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले जनाएको छ । ति व्यक्तिकाे परिचयसमेत गाेप्य राखिएकाे छ।
दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरुले मानिसहरुका सेलहरुमा जाँच हुँदा नदेखिने गरि लुक्न सक्ने क्षमता कोरोना भाइरसको देखिएको पनि बताएका छन् । कोरियामा १० हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने १९२ को मृत्यु भएको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र: एक सय १४ को मृत्यु, चार हजार बढी संक्रमित
भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण मर्नेको संखया एक सय १४ पुगेको छ । तीन सय २६ निको भएर घर फर्केको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतमा संक्रमितको संख्या चार हजार ४२१ पुगेका छ । भारतमा सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रमा संक्रमित रहेका छन् ।
महाराष्ट्रमा आठ सय ६८ संक्रमित रहेका छन् । त्यसैगरी दोस्रोमा तमिलनाडु ५७१ र तेस्रो दिल्लीमा ५०० जना संक्रमित छन् । यसैबीच जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले आज कोरोनाभाइरस संक्रमण बढ्ने खतरा देखिएको भन्दै त्यस्तो परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न टोकियोलगायत देशका केही भागमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेका छन् ।
“जनताको जीवन र अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर असर पार्ने अवस्था आएको मैले अनुभव गरेको छु । म आजै बेलुका आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्नेछु,” आबेले भने । “विशेष गरी टोकियो र ओशाका जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा” नयाँ संक्रमणको तीव्र वृद्धिलाई औंल्याउँदै उनले एक दिनअघि सोमबार नै आपतकाल घोषणाको योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
यो घोषणा मंगलबार मध्यरातदेखि लागू हुनेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रभावित सातै क्षेत्रका गभर्नरहरुले आमजनतालाई आआफ्ना घरभित्रै बस्न र व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न लगाउन सक्नेछन् । तर यो युरोप र संयुक्तराज्य अमेरिकाका कतिपय क्षेत्रमा देखा पर्ने लकडाउन जस्तो कडा प्रतिबन्ध होइन ।
जापानमा आपतकालीन अवस्थामा पनि मानिसहरू बाहिर घुमफिर गर्न वा व्यापार व्यवसाय खुला राख्न सक्नेछन् । यहाँ घरभित्र बस्न वा व्यवसाय बन्द नगर्नेमाथि कुनै दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छैन ।
घोषणाबाट टोकियो, छिमेकी चिबा, कानागावा र साइतामा, ओशाकाको पश्चिमी क्षेत्र र छिमेकी ह्योगो, र फुकुओकाको पश्चिमी क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् । यो आपतकाल करिब एक महिनाका लागि हुनेछ । संक्रमण बढ्दै गएपछि तत्काल आपतकाल घोषणा गर्न सरकारमाथि चिकित्सा विशेषज्ञहरू सुझाव दिएका थिए ।
आइतबार मात्र टोकियोको शहरी इलाकामा एकै दिन १४३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । हुनत यो संख्या विश्वका धेरै भागमा देखिएको संख्याभन्दा कम हो । राजधानी टोकियोका चिकित्सकहरूले यस हप्ता शहर पहिले नै “गम्भीर अवस्था” मा रहेको र अस्पतालको क्षमता कम रहेको भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
आपतकालको घोषणाको पक्षमा देखिएका टोकियोका गभर्नर युरिको कोइकेले मंगलबार टोकियो निवासीहरुलाई हिँडडुललाई सीमित गर्न अनुरोध गरेका छन् । “यसले दैनिक जीवनमा असुविधा हुन सक्छ, तर म सबैको सहयोगको लागि आह्वान गर्दछु किनकि जीवन खतरामा छ,” उनले भने ।
गभर्नर कोइकेले मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी टोकियोमा अबलम्बन गरिने उपायहरुका बारेमा जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता योशिहिडे सुगाले सार्वजनिक यातायातलाई कम नगरिने तर “व्यक्ति–व्यक्ति बीचको सम्पर्क र दूरी घटाउन उचित उपायहरू अपनाउने छौं” भने ।